Taariikhda logo Kia: taariikhdeeda iyo sifooyinka guud ee astaanta | Hal-abuurka khadka tooska ah
Nerea Morcillo | | dhowr
Xigasho: Gawaarida Mega
Dunida baabuurtu waxay noqotay mid aad u faayraysa sannadihii la soo dhaafay, gaar ahaan horumarka tignoolajiyada. Waxaa jira noocyo badan oo ka go'an qaybtan oo ay dalbadeen isticmaaleyaal badan sannado badan.
Lamana filayo in aan hore loogu dhawaaqin inay tahay mid ka mid ah qaybaha ugu kobaca suuqa. Mar haddii qof kasta oo naga mid ah uu leeyahay gaadiid nagu caawinaya in aan ku wareegno oo fududeeya safarradeenna dheer.
Qoraalkan, waxaan ku tusineynaa taariikhda Kia, mid ka mid ah noocyada baabuurta ugu caansan ee qaybta. Haddii aad xiisaynayso sida warshadani u koraysay sannadihii la soo dhaafay iyo waxa ay bilawday, ma seegi kartid waxa soo socda.
1 Waa maxay KIA
1.1 Sheekada Kia
2 Kobcinta astaanta Kia
2.2 astaanta ugu horreysa
2.3 rogan q
2.7 Sidee buu yahay astaanta hadda ee Kia
3 Meesha Kia
Waa maxay KIA
Kia waa astaan ​​baabuur oo asalkeedu yahay lagana aasaasay magaalada Kuuriya. Waxaa la aas aasay sanadkii 1944-kii, waxaana sanadihii lasoo dhaafay ay ka qeyb qaadatay horumarinta gaadiidka kale ee ku shaqeeya bini’aadmiga sida baaskiilada iyo gawaarida kale, sida mootooyinka. Waqtigan xaadirka ah, warshadani waxay noqotay oo lagu daray liiska shanaad ee baabuurta ugu weyn adduunka.
Waxa calaamad u ah calaamaddan oo ah qiimaha sare ee wax soo saarka, tan iyo markii ay gaadhay tirada 1,5 milyan oo baabuur, oo loo qaybiyay 9 waddan iyo warshado. Shirkadda ayaa sidoo kale ka tagin wax la rabo, maadaama ay hadda haystaan ​​wadar ahaan 15.000 oo shaqaale ah maalinba maalinta ka dambeysa si ay Kia suuqa ugu sii jirto.
Inta aan kor ku soo xusnay oo dhan ayaa ka dhashay. Kia waxa uu gaadhay wadamo ay ka mid yihiin Spain iyada oo ujeedadu tahay in la kordhiyo iibkeeda iyo xoojinta booska ay ku leedahay suuqa baabuurta. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan baabuurta.
Si aan u bilowno taariikhda warshadahan, waa in aan dib u jaleecnaa oo aan mar kale dib u jiheynaa tagtadii, gaar ahaan sanadka 1944. Inta lagu jiro sanadkan. shirkad la yiraahdo Kyongseong Precision ayaa la aasaasay, warshad u heellan samaynta baaskiillada ee magaalada Seoul. Sannado ka dib shirkaddan waxaa loo beddelay Kia waxayna noqotay silsiladdii ugu horreysay ee baabuurta ku samaysa Kuuriya.
Sannadahan, shirkadu waxay bilaabeysaa waxa noqon doona habka baaskiilkii ugu horeeyay ee Kuuriya. Baaskiilkan waxaa loo bixiyay Samchonriho waxaana la aasaasay 1952. Sannado ka dib, shirkadda waxaa loo beddelay Kia Industry Co Ltd.
Ka dib markii la sameeyo baaskiilkii ugu horreeyay, gawaarida ugu horreeya waxay yimaadaan. Sababtaas awgeed, baabuurkii ugu horreeyay ee qaata magaca K-360 ayaa la naqshadeeyay. naqshado kale sida T-1500, T-2000 ama T-6000 ku biiray. Waxa loo nashqadeeyay saddex taayir si ay u fududeeyaan maaraynta waxayna ahaayeen laba kursi.
Tobankan sano ayaa shaki la'aan ahaa kii ugu fiicnaa Kia. Inta lagu jiro sanadahaas baabuurkii ugu horreeyay waa la naqshadeeyay oo la abuuray. Ka dib abuuritaankii xigay ee gaadhigii ugu horreeyay, warshadaha lafteeda ayaa bilaabay mashruuc halkaas oo mishiinka shidaalka lagu bilaabay shidaalka ugu weyn ee baabuurta. Mashruucani wuxuu calaamadeeyay bilawga iyo dhalashada baabuurta ugu horeysa (Brisa Pick-Up B-1000). Sannado ka dib Kia waxay u qabataa mashruuc noocyada kale sida Peugeot iyo Fiat.
Markii la helay 80-aadkii. waxa aan maanta naqaano sida Bongo uu dhashay, baabuurka oo ka duwan kuwa nashqadaysan ilaa taariikhda, maadaama uu leeyahay sagaal kursi. Ka dib markii ay heshiis la saxiixatay shirkadda Ford, Kia waxay u ogolaataa nafteeda raaxada naqshadeynta baabuurta rakaabka ee ugu horreeya. Baabuurtan dalxiiska ah ayaa loo yaqaanay Concord.
Dhowr sano ka dib dhalashada Hyundai-Kia Automotive, iyo sidoo kale ku dhashay baabuurta sida Rocsta, Sephia, Avella, Elan, Suma iyo Enterprise. Sannadkii 1988-kii. warshadani waxay ku sii socotaa horumarinta magaca Kia Motor.
Si loo soo afjaro tobankan sano ee guusha, 2001 Kia ayaa dhaaftay tiro dhan toban milyan, unugyada la soo saaray. Sannadahan ilaa hadda, waxay u oggolaadeen astaanta inay sii wadaan horumarinta iyo koritaanka warshadaha. Intaa waxaa dheer, waxay gaartay tiro badan oo waddan ah, kuwaas oo hadda ah macaamiil badan oo sharad ku ah shirkaddan.
Ugu dambayntii, Kia waa shirkad dhawraysay raad shakhsiyeed muddo sanado ah. Si aad ula yaabto in aan baabuur ka helno shirkaddan magaaladayada ama agagaarkeena.
Kobcinta astaanta Kia
Ka dib markaan si kooban uga faalloonno taariikhdeeda, waxaan sii wadi doonnaa inaan sidoo kale faallo ka bixinno shirkadda aqoonsi shirkad ahaan. Sababtaas awgeed, waxaanu ku samaynay falanqayn yar oo ku saabsan naqshadeeda iyo dib-u-qaabaynteeda.
Magaca Kia wuxuu u turjumayaa dhalashada Aasiya. Magacaabiddeedu waxay ka timid habab taxane ah oo markii ugu horreysay ka dhashay Kuuriya iyo kuwa calaamadeeyay ka hor iyo ka dib warshadahan.
astaanta ugu horreysa
Astaantii ugu horreysay waxaa loogu talagalay soo saarista baaskiilkii ugu horreeyay ee Kuuriya. Taasi waa sababta calaamaddu aysan u ilaalineynin sifooyinka ahaanshaha naqshadeynta baabuurta isboortiga ama dalxiiska, laakiin naqshad cusub oo waqtiga ah. Naqshaddan, midabada monochrome ayaa loo isticmaalay.
Summada soo socota waxaa lagu sifeeyay inay ka kooban tahay nooc ka mid ah cagaarka Q. Macnaha summadani waa wax aan ka badnayn cusboonaysiinta shatiga astaanta. Shatigani kaliya ma beddelin sawirka shirkadda, laakiin sidoo kale badeecadda ay iibiyeen, tan iyo markii ay ka tageen iibinta baaskiilka ilaa baabuurtii ugu horeysay.
80-meeyadii, astaanta ayaa loo qaabeeyey si loo abuuro astaanta shirkadda iyo wakhtiga. Astaanta waxa loo sameeyay far ka kooban xarfo dhumuc weyn leh.
10 sano ka dib, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo dib-u-qaabayn, habkan, calaamadda ayaa lagu soo bandhigay hab calaamad ah oo ka samaysan nooc oval ah oo ku yaala si siman. Casaan iyo caddaan waxay noqdeen qayb ka mid ah midabada shirkadaha ugu muhiimsan ee astaanta.
Sannadkii 2002, naqshaddu waxay ilaalinaysaa sifooyinka la midka ah ee calaamadii hore, laakiin xariiqda garaafka ayaa aad u cad oo kooban. Naqshadu waa mid aad u yar oo halis ah, caadiga ah ee waqtiga.
Sidee buu yahay astaanta hadda ee Kia
Inta lagu jiro 2022, Kia waxa ay dareentay baahida loo qabo in la naqshadeeyo naqshad cusub oo aqoonsiga sumadda. Naqshad farsamo oo aad u badan oo isboorti, taas oo shaki la'aan muujinaysa qaar ka mid ah macnayaasha iyo tilmaamayaasha wakhtiga aan ku jirno nafteena.
Astaanta cusubi waxa ay ka guuraysaa nakhshad habaysan oo la akhriyi karo, waxaana bedelay naqshad mustaqbal oo aad u sii fog oo ay ku xareeyaan sifooyinka waaga cusub ee aynu ku jirno oo ay soo jiidato fariinta wax kasta oo iman doona. Intaa waxaa dheer, ka dib abuurista astaanta cusub, naqshado kale ayaa sidoo kale la tixgeliyey, sida samaynta gawaarida cusub ee korontada.
Qiyaastii laba sano ka hor, Kia waxay soo bandhigtay xayaysiis laga daawado dhammaan shabakadaha telefishinka. Meel uun ma ahayn, sababtoo ah waxay ka qarisay farriin gadaasheeda. Meesha waxaa inta badan lagu sifeeyay ka sheekaynta sheekada ciyaaryahan Josh JacobsCiyaaryahankan, shaqsi ahaan, laga soo bilaabo da'dii uu aad u yaraa shuruud looga dhigay inuu guri la'aan ku noolaado Ameerika. Hubaal waxaad la yaabi doontaa waxa meeshan qarinaysa ee dareenka daawadaha soo jiitay, markaas ayaanu kuu sheegi doonnaa.
Ka dib markii lagu dhawaaqay finalka NFL, Kia ma dhicin iyada oo aan la dareemin oo ku biirtay inay qayb ka noqoto xayeysiintan. Tani, iyo sidii aan horay u soo sheegnay, waxay isticmaaleen sawirka Josh Jacobs. Meeshu waxay qaadanaysaa ku dhawaad ​​70 ilbiriqsi waxayna ka sheekaynaysaa ciyaartoyga halka uu caruurnimadiisii ​​dib ugu laabtay isaga oo ujeedadiisu tahay in uu naftiisa la hadlo oo uu la waaniyo isaga iyo daawadayaasha arka iyo dhegaysigiisaba. Si taas loo sameeyo, wuxuu naftiisa ku yidhi: "Waa inaad naftaada rumaysataa, ka gudubtaa silica kugu xeeran iyo goobtaas waa goobtaada tijaabada. Ku dadaal in aad noqoto qof aan kuu ballan qaadayo in maalin uun aad noqon doonto qof kaas.
Ciyaaryahanka, kaas oo lagu qasbay inuu ku noolaado waddooyinka sanado badan, wuxuu muujinayaa sheeko soo jiidata sinnaan la'aanta dhaqaale iyo saboolnimada in qoysas badan ay ku nool yihiin Ameerika. Shaki la'aan, goobtani waxay noqotay mid ka mid ah kuwa ugu dareenka badan, iyo calaamadda lafteeda ayaa ka qayb qaadatay soo bandhigida sida ay muhiimka u tahay in la helo caawimo waqtiyada saboolnimada.
Intaa waxaa dheer, intii lagu jiray duubista goobta, ololaha iyo ciyaaryahanku waxay ku deeqeen 1000 dollars oo ka caawiyay.
Kia ayaa ilaa hadda loo taxaabay mid ka mid ah summadaha baabuurta sida ugu wanaagsan suuqa. Si aad u badan, sida aan awoodnay inaan xaqiijinno, waxay haysaa taariikh sifo ah. Intaa waxaa dheer, lama filayo, maadaama korriinteedu ay u ogolaatay in ay leedahay warshado badan oo loo qaybiyo dalal kala duwan oo adduunka ah.
Sababtan awgeed, waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay calaamaddan ilaa hadda, ma aanan garanayn sababta iyo sida. Hadda waa la gaadhay waqtigii aad sii wadi lahayd raadinta macluumaadka oo aad wax badan ka baran lahayd.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Taariikhda astaanta Kia